Jordania: Ho any Palestina, Mitondra Fitiavana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2010 7:15 GMT
Tamin'ity herinandro ity ireo mpitoraka bilaogy ao Jordania, izay ny ankamaroany dia manana razambe Palestiniana, dia nanoratra betsaka mikasika ny olana mianjady amin'ny Lafintany Andrefana (Cisjordanie) sy ny Afovoany-Atsinanana. Manontany i Jaraad, mpitoraka bilaogy avy ao Jordania, “Iza no Manely ireo Vaovao?”
Rehefa nanambàra fa handoro ny Korany amin'ny andron'ny 11 Septambra ny pasitora tsy dia fantatra loatra avy amina fiangonana kely tao Florida, izay tsy misy afa-tsy 50 monja (ny sasany aza milaza fa 30) no mpanara-dia azy, dia samy naneho hatezerana avokoa na ny Silamo na ny Kristianina. Nanoratra lahatsoratra an'arivony maro ireo Kristianina ho fanamelohany ny fihetsika tsy am-piheverana toy izany, ary ireo Silamo indray nanoratra, nandefa bitsika, nitoraka bilaogy mikasika an'io, ho izao/hanao an'itsy, hihetsika. Tany amina firenena Silamo sasantsasany dia nisy ny korontana ary nisy ny maty. Faly ilay pasitora satria azony ny 15 mn nampalaza azy ary ny Silamo koa faly satria tsy voadotra ny Korany.
Nefa, nahoana no misafidy ny hangina ny Jiosy sy ny Silamo nony injay ireo voanjo Jiosy mandoro Moske sy Korany maromaro? Nahoana isika no tsy mahita bitsika, pejy facebook na bilaogy miresaka ny heloka bevava tena mitranga? Tsy toa ny an'ilay pasitora any Florida, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia tena nandoro Moske sy Korany mihitsy ireo voanjo Jiosy.
Ny fanontaniako dia hoe nahoana no nahazo ny fifantohan-tsaina nokendreny ilay Pasitora te-halàza avy any Florida, ary mihoatra noho izany aza, nefa nony injay ny Jiosy tena nandoro Moske sy Korany dia nikombona daholo ny vava? Iza na inona no nahatonga ny raharaha Pasitora avy ao Florida ho vaovao goavana be manerantany? Nahoana no naha be kabary, fifanakalozan-dresaka sy adihevitra ny manodidina iny tantara iny?
Miaraka amin'ireo teknolojian'ny fifandraisana izay ananantsika ankehitriny dia lasa toy ny tanàna kely izao tontolo izao. Nefa mbola voasivantsivana ihany ny fanapariahana ny vaovao.
Arab Crunch dia nanoratra mikasika ny rindrambaiko vaovao an'i Phone izay mampiasa ny teknolojia fanehoana sarintany an'ny Google. Ho valinteny ho an'i Jaraad, io rindrambaiko io dia manome eo noho eo ny vaovao mivoaka ho eo ampela-tànan'ny mpanjifa liana aminy:
Facts on the Ground [Ny zava-misy eny an-kianja] dia mamela ny mpampiasa azy hijery sy hifantina ireo voanjo Jiosy mipetraka any amin'ilay faritra, na izany eo ambany fifehezana tanteraky ny manampahefana Palestiniana, na fifehezana amin'ny ampahany ihany, arakaraky ny…. taona nametrahana azy, ny mponina, ny foto-kevitra ananany (na ny tsy fisiany), ny toetoetrany (fivavahana na laika), ny velaran-tany Palestiniana bodoiny, ary ny sary maneho ny fitombon'ny mponina.
Io no ohatra iray hafa mikasika ny fomba nampiasàna ny iPhone sy ny sarintany Google.
Ny mpitoraka bilaogy hafa kosa mifanakalo resaka ny amin'izay làlana azo andraisana anjara amin'ny ezaka atao ho an'i Gaza. AquaCool dia midera ilay namany izay mandeha am-bisikileta avy any Pise ho any Roma noho izay antony izay.
Mampiely ny feo manerantany ho fampahafantarana ny hirifirin'ireo vahoaka ao Gaza, ary manangom-bola ho an'ny tetikasa maro sahanin'ny “Welfare Association” halefa ho an'ny vahoaka Palestiniana… Ndeha isika samy hanohana an'i Mishal sy hanampy azy hanatratra ny tanjony, dia ny mba hahafahana manampy an'i Gaza sy ny vahoakany.
Ny hafa manohana, na izy tenany mihitsy no mirotsaka hiaraka amin'ny diabe ho fandravàna ny sàkana an-dranomasina atao amin'ny seranantsambon'i Gaza. KinziBlogs no manoratra fankalazàna toy izao:
Ny mpitsabo nify malalantsika … nampianatra nandritry ny dimy taona ireo mpianatra ho mpitsabo nify avy ao Gaza tamin'ny alalan'ny aterineto! Afaka nampiasa ny fanomezam-pahazoavana manokana azony izy, ny talentany, ny traikefany mba hanampiana ireo mpianatra izay tena marani-tsaina tokoa nefa miaina anaty fepetra sarotra. Nambarany fa fifaliany izany ary atsy ho atsy dia hifanatri-tava voalohany indrindra amin'izy ireo izy, hitondra fitaovana ho azy ireo ary hanao tombana an'izay fitaovana efa ampiasain-dry zareo any.
… nilaza tamiko izy fa hiaraka amin'ny andiany faha-5 amin'ny Lifeline Convoy. Mahasarika ano koa ve izany?
Aboudism izao dia niaraka mihitsy tamin'ireny diabe ireny. Nanoratra izy tamin'ny 5 Oktobra:
Afaka ora vitsy monja dia hanainga miaraka amin'ny Global Life Line 5 (Vivapalestina) “Sharyan Al Haya 5” amin'ny diany ho any Gaza aho… Ho any aho anio, miaraka amina fihetseham-po misamboaravoara, fientanentanana, sy andraikitra ary adidy amin'ny tokantrano, ny fianakaviana sy ny hava-malala rehetra nilaozana any ambadika any, ankoatry ny zavatra hafa maro.
Tsy misy mahalala izay ho faharetan'ny dia. Tsy misy mahafantatra na ho voasakana any Latakia, na eny afovoan-dranomasina eny. Ny tokana mba fantatro, tsapako ny tsy maintsy andraisako anjara amin'ity hetsika iraisam-pirenena ity ho fampitsaharana ny fahirano mahazo an'i Gaza.
Ny 6 Oktobra, nanavao ny tatitra izy avy any Tiorkia. Somary taraiky kely tao Siria ny tarika nisy azy, izay:
Tsy maintsy nijanona isaky ny fari-piadidiana izahay noho ny fanasàna kely nataon'ireo mpitondra ny tanàna. Nandany fotoana betsaka ireny ka nahatonga fahataràna be ho anay. Na teo aza ny fahasarotan'ny familiana amin'ny làlana toy ireny rehefa alina ny andro sy ny fanarahamaso ny iray tarika, dia fahatsapàna hafa mihitsy ny fahitàna ireny olona rehetra ireny mivondrona mba hihofahofa hiarahaba anay sy ny fahitàna fa misy olona midera ny ataonao ary ankasitrahany ny ezaka ataonao.
Tsy dia hoe miavaka manokana io fibanjinana io tamin'ity herinandro ity. Ireo Jordaniana mpitoraka bilaogy dia manohy hatrany mibanjina an'i Gaza sy ny Lafintany Andrefana (Cisjordanie), mitory ny fanohanan'ny Jordaniana ny vahoaka Palestiniana izany.